Photo News In Arakan | Lumyo Chit
Muhammad Usman Hussain addedanew photo.
Jafar Arkane shared Mohamed Rofiq‘s photo.
Burmese ethnic rohingyas are facing very dangerous and serious situation at the movement.we hope that there is no way for rohingyas to live in Burma at the present time.The Burmese racists are trying to eliminate all rohingyas with various and serious types of ideological war.the burmese racist border guards hide out nearly 3000 rohingyas within one week…they killed nearly 10000 too. the wounded rohingyas are uncountable.nearly 200 overs rohingyas villages are burnt.there is no media and reporters in rohingyas areas…the burmese one side media is real killer of rohingyas.
IF YOU ARE THE REAL HUMAN BEING ON THIS EARTH,YOU HAVE A REAL DUTY TO USE A VOICE OF TRUTH ON SUFFERING PEOPLE OF THE WORLD.THE ROHINGYAS ETHNIC BURMESE ARE THE WORLD MOST SUFFERING HUMAN-BEING,NOW THEY ARE IN DIFFICULT SITUATION IN BURMA,THEY NEED YOUR HELPING .THE ROHINGYAS ARE KILLED,BURNT AND HIDE OUT BY RAKHINE RACIST AND ILL EDUCATED BURMESE JUNTA RAPACIOUS ARMIES……THE BURMA ONE SIDE RACIST MEDIA DO NOT MENTION ANY ROHINGYAS CAUSALITIES AT THE WAR TIME.THE REAL KILLER OF ROHINGYAS IS THE BURMESE MEDIA
မကြာသေးခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သွေးထွက်သံယို တိုက်ခိုက်မှုတွေလို ပြဿနာမျိုးတွေဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အပါအ၀င် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အရေးတကြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသ နေတယ်လို့ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေ တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက်တာ ဖြစ်ပါ တယ်။လူပေါင်း ၅၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး၊ အများ အပြား ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့သလို၊ ထောင်သောင်းချီ အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရတဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အခြေခံဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ လန်ဒန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် က နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြောလိုက်တာပါ။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး အဖြစ် ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့ လန်ဒန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်က ဆွေးနွေးပွဲ အတွင်း ပါဝင်သူ တဦးဖြစ် တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ကတော့ မကြာသေးခင် တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခတွေဟာ အစိုးရ အဆက် ဆက်က လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ref: VOA News (19.6.12)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) ပါတီဝင်လေးယောက်ကို သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိတယ်ဆိုပြီး ပထမပိုင်းမှာကတော့ ဖြန်ဖြေတာပေါ့နော်။ နောက်ပိုင်းမှာလူထုကို ထိန်းလို့မနိုင်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ပါတီကလူတွေက လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာနည်းနည်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေ ဖြစ်သွား တယ်လေ။ ခဲနဲ့ပေါတ်တာတို့၊ ဘာတို့။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ပါတီကလူတွေက စခန်းထဲကိုဝင်နေကြတယ်။ အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့ လူတွေလည်းရှိတယ်။
ဆူပူမှုနဲ့ အမှုဖွင့်ပြီး စစ်တွေထောင်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။အဲဒီ RNDP ပါတီဝင် ၄ ဦးကို ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီး စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှာ ပထမထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးနောက် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကို ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရပါ တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်တွေမြို့မှာ ဖမ်းဆီးခံရသူ ၉ ဦးရှိနေပြီး ကျောက်တော်မြို့မှာ ၁၁ ဦးရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော်များအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ ဇွန်လ (၁၉) ရက် နေ့စွဲနဲ့ တင်ပြ တောင်းဆို လိုက်ကြပါတယ်။
ဆရာတော်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေထဲမှာ- ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကို စစ်တွေမြို့ကနေ အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာတစ်နေရာမှာ သီးခြားနေထိုင်ခွင့် ချထားပေးဖို့၊ ရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂါလီတွေကြားမှာ တပ်မတော် တပ်ရင်းများ (ဒါမှမဟုတ်) ခိုင်မာ စိတ်ချရတဲ့ လုံခြုံရေးအပြည့်အဝ ထားရှိပေးဖို့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို စစ်ဆေးပြီး နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ် လက်ဝယ်မရှိသူတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှ ဖယ်ရှားပေးဖို့ စတဲ့အချက်တွေ ပါရှိပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေအကြား ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၅) နှစ်အတွင်း ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၈၊ ၂ဝဝ၁ နဲ့ အခု ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွေမှာ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း (၄) ကြိမ်တိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အခုဖြစ်စဉ်ဟာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ် လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်
Yehming Maungdaw shared Mohammed Shofique‘s photo.
Nouman Choudary and Muhammad Usman Hussain shared Rohingya Community الجالية الروهنجية‘s photo.
‎(image) 17/06/2012 Security forces arresting Rohingya Muslims in Maungdaw, Arakan, Burma – PLS RT
Nouman Choudary shared U Ba Sein‘s status update.
ရခိုင်ပြည်မှ မွတ်စလင်မ် ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ
၂၀၁၂ ခု၊ မေလ (၂၈)ရက် နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ကျောက်နီမော်ရွာမှ မသီတာထွေး အား လူတချို့က မစ္စည်းလု မုဒိန်းကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထို ကိစ္စတွင် မွတ်စလင်မ် လူငယ်သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးထားရာ တစ်ယောက်မှာ ကျောက်ဖြူ ထောင်ထဲ၌ သတ်သေသည်ဟုဆိုသည်။ ကျန်နှစ်ဦးကို သေဒဏ်အပြစ်ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ အမှုမှာ ခြင်္သေ့က သားကောင်ကို သတ်စားပြီး သိုးကလေးပါးစပ်တွင် သုတ်ထားပေးသည်ဟု တချို့ကဆိုကြသည်။
ဇွန်လ (၃)ရက်နေ့နံနက်က ၀ံသာနုရက္ခိတအဖွဲနှင့် ရခိုင်မျိုးချစ်အဖွဲ့ဝင်တချို့က တောင်ကုတ်မြို့တွင် မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများ ပြန့်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနေ့ ညနေတွင် သံတွဲမှလာသော မွတ်စလင်မ် ဘာသာရေးသမား (၁၀)ဦးကို တောင်ကုတ်မှ အကြမ်းဖက်သမားတချို့က ရိုက်ခုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့တွင် မောင်တောမြို့၌ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့နှင့် မွတ်စလင်မ်တချို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ထိုနေ့ညနေတွင် ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနများဖြစ်သော (ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေနှင့် အာရ်အာဖ်အေ)တို့မှ စစ်တွေမြို့ရှိ ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ RNDP အဖွဲ့ဝင်တချို့နှင့် မောင်တောကိစ္စကိုမေးမြန်း စုံစမ်းခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စစ်တွေမြို့အခြေအနေကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ ပြည်နယ် လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မြတ်ကျော် အား စစ်တွေမြို့အခြေအနေ မေးမြန်းခဲ့ရာ အဆိုပါပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက စစ်တွေမြို့တွင် အခြေအနေအလွန် တင်းမာနေကြောင်း၊ ယနေ့ညနေတွင် မွတ်စလင်မ်တစ်သောင်းကျော်က လမ်းပေါ်ထွက်လာကြောင်းစသည်ဖြင့် လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိသော လုပ်ကြံသတင်းတစ်ခုကို မီဒီယာများသို့ ရည်ရွယ်ချက်အပြည့်ဖြင့် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် မွတ်စလင်မ်များသည် ဘင်္ဂလာဒေရှ့်မှ ဝင်ရောက်လာကြောင်း အခုလိုပြောကြားခဲ့သည်။ (သဲချောင်းဘက်မှ ဘင်္ဂလာဒေရှ့် အဝင်အထွက်လုပ်နိုင်တဲ့ အပေါက်တစ်ပေါက်ရှိပါတယ်၊ အဲဒီလမ်းကြောင်းမှ ဘင်္ဂလီတွေ စက်လှေများနဲ့ ဝင်လာရင် သုံးနာရီပဲလိုပါတယ်) ဟု ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှင့်လှုံ့ဆော်လုပ်ကြံ ပြောဆိုခဲ့သည်။
သတင်းမှန်မှာ ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့တွင် RNDPမှ ဦးဆောင်ပြီး စစ်တွေမြို့အနီး မြို့နယ်များမှ (အထူးသဖြင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ) လူအမြောက်အများကို စစ်တွေသို့ခေါ် ယူလာခဲ့ သည်။ ထိုသို့ ခေါ်ယူလာသော အကြမ်းဖက်သမားများကို အုပ်စုသုံးခုခွဲပြီး ဖြန့်ကျဲ နေရာချထားခဲ့သည်။ လူ ၂၀၀ ကျော် ပါဝင်သော အုပ်စုတစ်ခုကို နာဇီရပ်ကွက် အနီးရှိ ဦးအောင်နိုင်ဝင်း ပိုင်ဆိုင်သော ဆန်စက်ကွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယအုပ်စုကို စစ်တွေသင်္ဘောဆိပ် အနီးတွင်လည်းကောင်း၊ တခြားအုပ်စုတစ်ခုကို ဘောလုံးကွင်း ရပ်ကွက်အနီးတွင်လည်းကောင်း အသီးသီးချထားသည်ဟု သိရသည်။
ဘောလုံးကွင်းရပ်ကွက်မှာ (၁၉၅၃-၅၄) ခုနှစ်ခန့်က ဦးနုအစိုးရမှ အရှေ့ပါကီစတန် (ယခုဘင်္ဂလာဒေရှ့်) အ၀ကျွန်းမှ ရခိုင်ပြည်သို့ခေါ်သွင်းလာသော ရခိုင်လူမျိုးများအနက် တချို့နေထိုင်သည့် ကျေးရွာဖြစ်သည်။
အ၀ကျွန်းမှလာသော ရခိုင်များက ဒေသခံရခိုင်များနှင့်အစိုးရ၏ ထောက်ခံစာနာမှုကိုရရှိ ရန်အတွက် ဘင်္ဂလာဒေရှ့်နိုင်ငံတွင် လူနည်းစုရခိုင်များကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ အမှန်မှာ အရှေ့ပါကီစတန်တွင် လူမျိုးရေးအရ ဖိနှိပ်မှုမရှိဘဲ လူနည်းစုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနကိုပင်ဖွင့်ထားလျက် လူနည်းစုများကို ကာကွယ်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်မှာလည်း လူနည်းစုများကို မတော်မတရား ချုပ်ချယ်ဖိနှိပ်ခြင်းမရှိချေ။
ဒေါက်တာအေးမောင် ဦးဆောင်ခေါ်လာသော အကြမ်းဖက်အုပ်စုများသည် စစ်တွေမြို့၏ အခြေအနေကိုနားမလည်ကြပေ။ မွတ်စလင်မ်အိမ်ဆိုလျှင်ပင် အိမ်ထဲဝင်ပြီး သတ်ဖြတ်ကာ အိမ်များကို မီးရှိုးခဲ့ကြသည်။ဇွန်လ (၉)ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းတစ်ခုက စစ်တွေမြို့ရဲစခန်းမှ ကိုက် (၃၀၀)ခန့် ဝေးကွာသော အိမ်ခြေ (၄၀)ခန့်ရှိသည့် ဈေးဟောင်းမောလိပ်ရှိ မွတ်စလင်မ်အိမ်များ အတွင်းဝင်ရောက်ပြီး လူများကို သတ်ဖြတ်လျက် အိမ်များကို မီးရှိုးခဲ့ကြသည်။ မွတ်စလင်မ်အိမ်အနီးအနားရှိ ရခိုင်အိမ်များလည်း မီးလောင်ရာတွင် ပါသွားကြသည်။
ဈေးဟောင်းမောလိပ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဆေးတပ်ဌာနမှ ဒေါက်တာ ဒုဗုလ်မှူးကြီး ကျော်ခင် (ကွယ်လွန်)၏ အမျိုးအဆွေများ၊ ရန်ကုန် အာရ်အိုင်တီမှ ကတိက ဒေါက်တာ စောဖြူတို့၏ မျိုးဆွေများနှင့်အခြားကမာန်များ၊ ရခိုင်-မွတ်စလင်မ်များ နေထိုင်ရာနေရာ ဖြစ်ပြီး လူတော်တော်များများ မီးလောင်သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ အလားတူ စစ်တွေမြို့ ပိုက်ဆိပ်ရပ်ကွက် သတ်ဖြတ်မီးရှိုးမှုများပြုလုပ်သော အခါတွင်လည်း စာရေးဆရာမ ဒေါ်စောမုံညှင်း (ရှမ်းလူမျိုး)၊ ခင်ပွန်း ဦးကာ (အကောက်ခွန်ဌာန အရာရှိဟောင်း) တို့၏ မျိုးဆွေများအားလုံး သတ်ဖြတ်မီးရှိုး ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
စစ်တွေမြို့၌ ရခိုင်လူဦးရေများသည်ကတစ်ကြောင်း အုပ်ချုပ်ရေးလှုံခြုံရေးဌာနများတွင် ရခိုင်အရာရှိများက ကိုင်တွယ်ထားသည်ကတစ်ကြောင်း တို့ကြောင့် မွတ်စလင်မ်များသည် တုတ်၊ ဓါးများကို ကိုင်ဆောင်ပြီး လမ်းပေါ်တက် ရခိုင်အိမ်များကို တိုက်ခိုက်မီးရှိုး သည်ဆိုခြင်းမှာ လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိဘဲ လုပ်ကြံသတင်းများသာဖြစ်သည်။
မွတ်စလင်မ်တချို့မှာ မိမိတို့ကျေးရွာမှ အိုးအိမ်များကို တိုက်ခိုက်ရန်လာသော အကြမ်းဖက် သမားများကို တစ်ခါတရံခုခံခြင်းဖြစ်သည်။
ဇွန်လ (၁၀)ရက် နံနက်တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများသည် မြို့မရဲစခန်းနှင့် ကိုက် (၅၀၀) ခန့် ဝေးကွာသော ဦးဥတ္တမပန်းခြံတွင်စုဝေးခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှာ ဆန်ရှာဝယ်ရန် လာသော အသက် (၁၂)နှစ်အရွယ် မွတ်စလင်မ်လူငယ်တစ်ဦးကို ရခိုင်အကြမ်းဖက်များက ဓါးဖြင့် ခုတ်သတ်လိုက်သည်ဟု အာရ်အာဖ်အေမှ ကြေငြာခဲ့သည်။ လမ်းပေါ်တွင် မွတ်စလင်မ်များကို မတွေ့ရကြောင်း ရခိုင်များကိုသာ တွေ့ရကြောင်း ၄င်းကပြောဆိုခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမားများက စစ်တွေမြို့ရှိ မွတ်စလင်မ်ရွာအတော်များများကို တိုက်ခိုက်မီးရှိုးခဲ့သည်။ မီးရှိုးရန်လာသော သူများကို ထွက်ကြည့်သော မွတ်စလင်မ်များကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သဖြင့် လူများအပြင်သို့ မထွက်နိုင်ဘဲ အိမ်အတွင်းတွင်ပင် မီးလောင်သေဆုံး ခဲ့ကြသည်။
စစ်တွေမြို့ရှိ မွတ်စလင်မ်များအပေါ် ရက်စက်စွာတိုက်ခိုက်မှုမှာ အလွန်ပြင်းထန်သဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မှ ဇွန်လ (၁၀)ရက်နေ့တွင် ကာဖျူးအမိန့်ထုတ်ခဲ့ရသည်။ ကာဖျူးအမိန့်မှာ ညနေ (၆) နာရီမှ နံနက် (၆)နာရီထိ ဖြစ်သဖြင့် အကြမ်းဖက်သမား ရခိုင်များသည် ညအချိန်တွင် သောက်စားအနားယူပြီး နံနက် (၈) နာရီခန့်ဆိုလျှင် မွတ်စလင်မ်တိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ရှိသမျှ မွတ်စလင်မ်များကို သတ်ဖြတ်ပြီး အိမ်တွေ့တိုင်းမီးရှိုးခဲ့ကြသည်။ အကြမ်းဖက် သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မီးရှိုးမှုကြောင့် စစ်တွေမြို့ထဲတွင် မွတ်စလင်မ်အိမ် မရှိသလောက် ဖြစ်သွား ခဲ့သည်။ မွတ်စလင်မ်အများအပြားမှာ မိမိတို့အိမ်ထဲတွင် သေခြေခဲ့ကြသည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်သည် (၁၉၅၃-၅၄) ခုနှစ်တွင် ဖဆပလမှ အရှေ့ပါကီစတန်မှ ခေါ်သွင်းလာသော ရခိုင် အ၀ကျွန်းသား မိဘများမှ မွေးဖွားလာသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးစိတ်အလွန်ပြင်းထန်သူ အစွန်းရောက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ယခုဖြစ်ပွားသော မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်မှုတွင် ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်သော RNDP ပါတီအဖွဲ့ဝင်များက သတင်းဌာနာများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင် ရခိုင်အကြမ်းဖက် သမားများ၏ ရက်စက်မှုကို မွတ်စလင်မ်များက ကျူးလွန်ခဲ့သကဲ့သို့ ပုံဖော်ဖန်တီး ခဲ့ကြသည်။ စစ်တွေမြို့မှာ ယခုအခါ တပ်မတော်က အကာအကွယ်ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် အကြမ်းဖက်သမားရခိုင်များသည် ပေါက်တော၊ ကျောက်တော် စသောမြို့နယ်များသို့ သွားရောက် တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၂ခု၊ ဇွန်လ (၁၉) ရက်။
Musa Fir shared Hitoshika Enrique‘s photo.
Ha Mi Dah shared Kyawthuk Oo‘s photo.
၇ခိုင် အကြမ်းဖက်သမားတွေ ၇ဲ. လက်ချက် ကြောင်. ကျဆုံး ခဲ. ၇တဲ. ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသား ကလေးငယ် တယောက်
Noor Hussain Arkani shared The Voice Weekly‘s photo.
ya alla bless to him jannat……………..?
Noor Hussain Arkani shared Ajmeer Omar‘s photo.
Kamal Kamal Arkani shared U Ba Sein‘s photo.
Abu Saleh shared Khaled Aslam‘s photo.
Saeed Jamshed shared Mukhtar Makki‘s photo.
Abu Saleh shared Mohammad Noor‘s photo.
عبد العزيز كريم الأركاني
أخبار الأربعاء 1433/7/30 عن مآسى مسلمي بورما ” الروهنجيا “
1.أطباء بلا حدود: تحاول الوصول إلى المتضررين جراء أعمال العنف، وتطالب في المقابل السماح للمتضررين بالوصول إليهم.
2.استدعاء الشرطة البوذية لـ8 من المسلمين للتشاور معهم لإيقاف العنف بين الطرفين، فأبادتهم جميعاً قتلاً بالرصاص (م.روهنجيا)
3.المفوضية العليالشؤون اللاجئين:ستقوم بتزويد موادالإيواء والإغاثةالأساسية للنازحين.وتقوم برصدالتطورات على …See More
red ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل‘s photo.
استحلفك بالله ان تنشر الصورهديرالزور:::: شهيد مجهول الهوية ارتقى أثناء اقتحام …
Ai cobeti shaporer dipteke tola barmar tolarsoho lokgon
Muhammad Usman Hussain shared Mukhtar Makki‘s photo.
Abu Saleh shared Dore Fatah‘s photo.
d Islam Solution2Humanity‘s photo.
OH ALLAH :: Protect our Sisters
OH ALLAH :: Save the Sisters of Muslim Ummah.
ابو رائد الاركاني shared Faruq Omar‘s photo.
<img src="http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s480x480/555757_208253605952268_245742324_n.jpg&quot; alt="ခေါင်ကမိုးယိုနေတာဘဲး မွတ်စလင်မ်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ? ? ?</p>
<p>noble က April 15, 2012 – 1:00am မှာ တင်တာ<br />
Message ပို့မယ် View Blog</p>
<p>အကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ပက်သက်ပြီး မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဂျာမန်မွတ်စလင်မ်သာသနာ့ပညာရှင် ပြန်ဖြေတဲ့ အဖြေကို</p>
<p>ပထမကမ္ဘာစစ် ကိုဘယ်သူစတင်ခဲ့သလဲ? မွတ်စလင်မ်တွေလား?….</p>
<p>ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကိုကောဘယ်သူစတင်ခဲ့သလဲ? မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>သြစတြေးလျမှာ အဘိုးရီဂျင်း မျိုးနွယ်ဝင် လူသန်းပေါင်း၂၀ လောက်ကို ဘယ်သူသတ်ခဲ့လဲ?မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>နာကာဆာကီ နဲ့ ဟီရိုရှီိးမားမြို့တွေကို ဘယ်သူ နြူးကလီးယားဗုံးကျဲခဲ့တာလဲ… မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>မြောက်အမေရိကက အင်ဒီးယန်း လူသန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဘယ်သူသတ်ခဲ့တာလဲ မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>တောင်အမေရိက က အင်ဒီးယန်း လူသန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ဘယ်သူသတ်ခဲ့တာလဲ မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>အာဖရိကက လူသန်းပေါင်း ၁၈၀ ကို အစေခံကျွန်တွေအဖြစ် ဘယ်သူ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး</p>
<p>အဲ့ဒီ့ထဲက ၈၈% ကို အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကို ဘယ်သူ (ရက်ရက်စက်စက်) ပစ်ချခဲ့ကြတာလဲ… မွတ်စလင်မ်တွေလား?</p>
<p>ပထမဆုံး….အကြမ်းဖက်ဝါဒ ဘာလဲဆိုတာကို အရင် သေသေချာချာ အဓိပါယ်ဖွင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါမယ်။</p>
<p>တကယ်လို့ မွတ်စလင်မဟုတ်သူတစ်ယောက် မကောင်းတာ တခုခုလုပ်ရင်…အဲ့ဒါက ပြစ်မှုတဲ့ဗျ</p>
<p>တကယ်လို့ အဲ့ဒီ့အရာကိုပဲ မွတ်စလင်မ်တစ်ယောက်ကလုပ်ခဲ့ရင် သူ့ကို အကြမ်းဖက်သမားတဲ့ဗျာ…</p>
<p>ဒါ့ကြောင့် ဒီလို အမြင်၂မျိုးဖြစ်နေတဲ့ standard ကိုအရင် ဖယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျ…ပီးမှ လိုရင်း point ကိုပြောသင့်တယ်။</p>
<p>https://www.facebook.com/photo.php?fbid=278437098909202&set=a.2&#8230; မှ ကူးယူ ၍ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်…</p>
<p>* * * * * * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * *</p>
<p>တကယ်တမ်း သူတို့ သတ်ခဲ့တဲ့..ဗုံးတွေကြဲခဲ့ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ လူသန်းပေါင်းမြောက်များစွာကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ</p>
<p>လူသား မျိုးနွယ်ထုတွေကို မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။</p>
<p>တိရစ္ဆာန်တွေတောင် မျိုးမသုဉ်းအာင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေ လုပ်ကြသေးတာပဲ..</p>
<p>လူသားက အင်မတန် အသိဥာဏ် မြင့်မားပြီး တန်ဖိုး ကြီးပါတယ်။</p>
<p>ဒီလို မျိုးဖြုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းက အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ် မဟုတ်ဘူးလား ဟု မေးချင်ပါသည်။</p>
<p>ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြို ခွဲနေသူများမှာ မည်သူများ ဖြစ်သူကို ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ မှန်မှန်ကန်ကန် သိစေချင်ပါသည်။</p>
<p>အစ္စလာမ်က လူသားများအား အဓိပါယ်မဲ့ နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်ဖို့၊ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ဖို့ ဝေးစွ…</p>
<p>ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရာဟ် ၅ အာယတ် ၃၂ မှာတောင်</p>
<p>လူတစ်ယောက်၏ အသက်ကို ကယ်တင်ခြင်းသည် လူသား မျိုးနွယ်ထု တစ်ရပ်လုံး၏ အသက်ကို ကယ်တင်သကဲ့သို့ ဖြစ်သလို</p>
<p>လူသားတစ်ယောက်ကို သတ်လျှင် လူသားမျိုးနွယ်ထု တစ်ရပ်လုံးကို သတ်သလိုဖြစ်သည် လို့ သင်ထားပါတယ်။</p>
<p>ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှ ဝင်ပြိုင်ရင်း အလ္လာဟ်ပေးလို့ ဆုရခဲ့ဖူးတဲ့</p>
<p>အစ္စလာမ်သည် ငြိမ်းချမ်းသော သာသနာဖြစ်သည်</p>
<p>ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ် ရေးထားတယ်….</p>
<p>အဲ့ဒီ့ထဲမှာ အစ္စလာမ် ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သရုပ်သဏ္ဍန်ကို ပေါ်လွင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ပုံဖော်ထားပါတယ်။</p>
<p>ကျွန်မ စာရိုက်လို့မပီးသေးလို့ ..စာရိုက်လို့ပီးရင် တင်ပေးပါမယ်။</p>
<p>ကြိုးစားလျှက်” width=”443″ height=”463″ />
ခေါင်ကမိုးယိုနေတာဘဲး မွတ်စလင်မ်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ ဘယ်သူပြောလဲ ? ? ?
Ibrahim Habib and ابو رائد الاركاني shared أبو رائد الفريد الأركاني‘s photo.
ياعالم الغيب انك تعلم عن حال إخواننا المسلمين المأسورين في أركان “بورما”
brahim Hussain sharedalink.
အ၀ကျွန်းသားတွေ၊အနောက်သားတွေ ကိစ္စကို ဘယ်လို ရှင်းမလဲ- ~ Rohingya Blogger
မွတ်စလင်များစားစရာ၊ ၀တ်စရာ မရှိပါ။
Saeed Jamshed shared Mohammed Siddique‘s photo.
Like · · Share ·2hours ago·
Hossain Arkani likes this.
ary and Aung Min sharedalink.
“မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုကို တကယ်လိုလားတဲ့ သူတွေလား” ( By Aung Min)
“မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုကို တကယ်လိုလားတဲ့ သူတွေလား” Aung Min ( B.A,LL.B) မြန်မာ နိူင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားပေါင်း တစ်ရာကျော်နေထိုင်တဲ့ နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို.တိုင်းရင်းသားတွေဟာ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှု တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ကို တကယ်လိုလားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီး ၊တစ်ချို. တို…
muslim childern in myanmar
ad Usman Hussain shared Mukhtar Makki‘s photo.
ابو رائد الاركاني shared Minmin Lat‘s photo.
Usman Hussain shared Mukhtar Makki‘s photo.
Demonstration in front of EU Parliament Brussels in Belgium 049.MOV
Addressing by Nurul Islan ( ARNO ) on the real situation of Rohingyas in Arakan State where Massacre has been going on by Moghs and their allies Burmese mili…
Ibrahim Hussain updated his cover photo.
ဒေါ်စု ပြောခဲ့ တဲ့ ၇ိုဟင်ဂျာ၁။ ရိုဟင်ဂျာတွေပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စုကပြောခဲ့တာကို မိမိသန်သလို ဘာသာပြန်နေသူများအတွက် ဇွန်လ(၁၈) ၂၀၁၂က Oslo Forum Press Conference မှာ ဒေါ်စုတစ်ကယ်ပြောခဲ့တာကို နားထောင်ရေးချပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ကိုပါ တင်ပြသည်။ အချက်အလက်ကို ထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ် မဖြစ်ကို ငြင်းခုန်နေခြင်း မ…See More
ROHINGYAS WANTS THE UN ARMIES FOR THEIR PROTECTION IN BURMA.ROHINGYAS DO NOT BELIEVE BURMA ARMIES. THEY ARE STILL ON OLD IDEAS.WHO TELLS THAT BURMA IS DEMOCRACY? I DO NOT BELIEVE IT…IT IS A BUSINESS TO GET MONEY FROM WEST.
A VOICE FOR ROHINGYA FROM PAKISTAN.
RNDP PARTY IS KILLER PARTY.
Jafar Arkane shared Thi Ha‘s photo.
စစ်တွေတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်..တိုက်ပွဲများအနက် ၁၁ ရက်နေ.ကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပီး ကုလားများဘေးရန်ကြောင့်လုံခြုံရေးယူထားသည်. တပ်မတော်သားများ
Rohingya Arakani Muslims Needs our Help. (148 photos)
Yehming Maungdaw shared Abdul Rahman Yousuf‘s photo.
Like · · Share ·9hours ago·
Soe Myint likes this.
Jafar Arkane shared RSO New Spirit‘s photo.
Muslims women and children from villages gather before being relocated to secure…
များမှ တာမွေဈေး ပြောင်းရွှေ့မည်ဆိုခြင်း
Rohingya World Refugee Dayhundreds of Rohingya women and girls attending on Wo…2 shares
A person throwsabucket of warter atahouse engulfed in flames in Sittwe, Myan…
Noor Aminee shared Paul Smit Author and speaker for “One”‘s photo.
TRY TO KEEP UR REALITY WITH TRUTH…THE GOD IS WITH U ALL THE TIME BUT DO THE BEST THING FOR ALL PEACE.
Nouman Choudary and Noor Aminee sharedalink.
Training Center of arakan liberation Army
ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီမှ ရခိုင်ပြည် ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံကြိုးစားလျှက်ရှိနီပါရေ အဖရခိုင်ပြည်ကြီးလွတ်မြောက်မှ ဒီမိုကရေစီ လူ့ အခွင်…
ref: VOA News (19.6.1012)
Ibrahim Habib sharedalink.
Hayre Manobota ! Rohingya Refugees
Thousands of Rohingya refugees in Bangladesh are living u…
Jafar Arkane shared MyanmarMuslim InfoCenter‘s photo.
Kotin Maung shared Thet Thet Tun‘s photo.
Rakhine was an independent state until 1784. When Burma was invaded by British, …
One soldier wounded from unrest in SittweYangon, June 12
Naing Win Zahid was tagged in Chi Chi Naing‘s photo. — with Abser Khan Jamil and Kyauk Taw.
အစွန်းရောက်ဝါဒီဟက်ကာများကပြည်တွင်းပြည်ပ၀က်ဘ်ဆိုက်များအားအစွန်းရောက်ဝါဒီ ဖေစ်ဘွတ် ဟက်ကာ အဖွဲ့များမှ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရှိ မွတ်စလင်မ် ၀က်ဘ်ဆိုက်များ အားတိုက်ခိုက်
နိုင်ငံများ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး ဖိအားများကို လေ့လာပြီး မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Fund for Peace မှ တနင်္လာနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကျရှုံးနိုင်ငံများစာရင်း “Failed State Index (FSI)” တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အဆင့် ၁၈ တွင် ရှိနေကြောင်း တွေ့ရသည်။
← UNCONFIRMED report/complaint letter I got about Muslim deaths and damaged masjids in Sittwe ONE town
The Muslims of Burma- ဝါးခယ်မမောင်မင်းနိုင်ပြန်ဆိုသည် →